Soo-saareyaasha Nadiifinta Hawada - Shiinaha Warshadda Nadiifinta Hawada & Alaab-qeybiyeyaasha
Sifeeyaha Hawada ee Hawsha Jeermiska lagu nadiifiyo
Qiyaasta jeermiska jeermiska nadiifinta ee jeermiska hawada ee nooca nadiifinta ayaa ah ilaa 99.9%. Nadiifi Heerka Bixinta Hawada (CADR): 480m3 / h, oo ku habboon aagga 40-60m2. Si wax ku ool ah u tirtir urta oo nadiifi PM2.5, cariiri, manka, boodhka, VOCs. Sifeeyaha hawada ayaa lagu tijaabiyey xarunta ogaanshaha microbiology. Heerka dilka ee virus-ka H1N1 iyo virus-ka H3N2 waa qiyaastii 99.9%.
Nidaamka Sifeynta Hawada ee Jidka Keli ah
Tayada Hawada Sare ee Gudaha, Nuxurka Oxygenka Sare Nidaamka sifeynta hawo nadiifka ah ee hal-waddo ah ayaa hawo nadiif ah banaanka ugu siiya qolka nadiifinta sare. Waxay ku qalabeysan tahay miirayaal laba jibbaaran oo leh heerka sifeynta PM2.5 ee ka badan 95%. Waxaa loo isticmaali karaa si wadajir ah loola shaqeeyo hawo qaboojiye soo kabashada tamarta si loo nadiifiyo hawo wanaagsan midkoodna waxaa loo istcimaalaa si madax banaan hawo nadiifinta nidaamka qaboojiyaha. Waxay leedahay shaqooyinka ikhtiyaariga ah ee wareegga gudaha. Xaaladda marka aysan ku habboonayn in ...
Sanduuqa Sunta Jeermiska Hawada ee Nidaamka HVAC
Noocyada Nidaamka Sanduuqa Jeermiska Hawada Cusub
(1) Hawlgal la'aan
Ku dilo fayraska hawada waqti yar gudahood, taasoo si weyn u yareyneysa suurtagalnimada gudbinta virus-ka.
(2) Hawlgal buuxa
Noocyo kala duwan oo nadiifin ah ayaa la soo saaray oo lagu sii daayay goobta oo dhan, iyo sunta waxyeelada leh ee kala duwan ayaa si firfircoon u burburay, taas oo ah mid wax ku ool ah oo dhammaystiran.
(3) Wasakhda hawada
Ma jiro wasakh labaad iyo sawaxan eber ah.
(4) Lagu kalsoonaan karo oo ku habboon
(5) tayo sare leh, rakibid haboon iyo dayactir
Codsi: guri la degan yahay, xafiis yar, xanaanada, iskuulka iyo meelo kale.